lips – Healthy Life Journal
နှုတ်ခမ်းနှင့်လျှာကို ကိုက်မိလျှင် . . .
ကိုယ့်နှုတ်ခမ်း ဒါမှမဟုတ် ကိုယ့်လျှာကို ကိုယ့်ဘာသာပြန်ကိုက်မိတာက မထင်မှတ်ဘဲ ဖြစ်လေ့ရှိပါတယ်။ ကလေးတွေဆိုရင် သွားဘက်ဆိုင်ရာကုသမှုအပြီး ထုံဆေးကြောင့် ထုံနေစဉ်မှာ နှုတ်ခမ်းနဲ့ ပါးစောင်ကို ကိုက်မိနိုင်ခြေ များတတ်ပါတယ်။ အဲဒီလို ကိုက်မိတဲ့အခါမှာ နာကျင်မှုကို အရင်ဆုံးခံစားရပြီး နောက်ဆက်တွဲဝေဒနာတွေ မကျန်ခဲ့အောင် အောက်ပါနည်းလမ်းတွေကို လုပ်ဆောင်ပေးပါ။...
Q. နှုတ်ခမ်းတွေခြောက်ပြီး နေရခက်နေလို့ပါ။ ဘယ်လိုလုပ်သင့်ပါသလဲ။ ဒေါက်တာတင့်ဆွေ မှ ပြန်လည်ဖြေကြားပေးပါသည်။ A. Cracked lips နှုတ်ခမ်းကွဲတာလို့လည်းခေါ်တယ်။ ရေဓာတ်ခမ်းခြောက်ပြီး ကွဲနေတာပါ။ ရာသီဥတု အေးတဲ့အချိန်မှာ ပိုဖြစ်တယ်။ နှုတ်ခမ်းကို စွတ်စိုနေအောင် ကာကွယ်မှုပေးထားတဲ့ Oily film အလွှာပါးပါးလေးက...
သင့်နှုတ်ခမ်းတွင် နှုတ်ခမ်းနီမြဲနေစေမည့် လှည့်စားနည်း
၊ လရိပ်မေ ၊ ပွဲလမ်းသဘင် အခမ်းအနားတွေကို သွားတဲ့အခါမှာ အစာစားပြီးလည်း နှုတ်ခမ်းနီမပျက်စေဖို့ ကြာရှည်ခံတဲ့ နှုတ်ခမ်းနီအမျိုးအစားကို ရွေးဆိုးသင့်ပါတယ်။ နှုတ်ခမ်းနီဆိုးတဲ့အခါ နှုတ်ခမ်းသားပေါ်မှာ အရောင်တွေအများကြီး ရှိမနေစေဖို့ အောက်ပါနည်းလမ်းသုံးရပ်ကိုသုံးပြီး နှုတ်ခမ်းနီဆိုးပေးပါ။ – ပွဲသွားမယ့် နေ့နံနက်ခင်းမှာ နှုတ်ခမ်းသားကို ဗက်ဆလင်း...
ကျန်းမာရေးအတွက် သဘာဝဆေးတစ်လက် နှုတ်ခမ်းကွဲခြင်း
၊ ဇွန်ခိုင်ဦး ၊ (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) နှုတ်ခမ်းကွဲတာက မကြာခဏဖြစ်တတ်ပြီး အလွန်နာကျင်တာကြောင့် အနာကျက်အောင် စောင့်ရပါတယ်။ နှုတ်ခမ်းကွဲတာက ကြီးပြီး သွေးထွက်တာ မရပ်မနားဖြစ်နေရင်တော့ ဆရာဝန်နဲ့ပြသင့်ပါတယ်။ သေးငယ်ပြီး အနာကျက်လွယ်မယ့် နှုတ်ခမ်းကွဲအနာမျိုးဆိုရင်တော့ အောက်ပါအိမ်တွင်းကုထုံးတွေက အဆင်ပြေစေမှာပါ။ သဘာဝဆေး (၁) သန့်ရှင်းပါ...
၊ လရိပ်မေ ၊ နူးညံ့ပြီး ပြည့်တင်းတဲ့ နှုတ်ခမ်းသားဖူးဖူးလေးပိုင်ဆိုင်စေမယ့် နည်းလမ်းတွေကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ အဆင့် (၁) သွားပွတ်တံနုနုလေးဖြင့် တိုက်ပါနှုတ်ခမ်းသားကိုသွားပွတ်တံနုနုလေးနဲ့ညင်ညင်သာသာ ပွတ်တိုက်ပေးပါ။ ပြီးရင် နှုတ်ခမ်းဆိုးဆေး (Lip balm)ဆိုးပေးပါ။ အဆင့် (၂) နှုတ်ခမ်းသားကိုအနားသတ်ပေးပါနှုတ်ခမ်းသား ပုံပေါ်စေဖို့ အညိုရောင်နှုတ်ခမ်းဆိုးခဲတံ...
နှုတ်ခမ်းသားညိုမည်းနေလျှင် . .
နှုတ်ခမ်းသားညိုမည်းတဲ့အခါ ပန်းနုရောင်သမ်းပြီး ကြည့်ကောင်းလာစေဖို့ အောက်ပါအချက်တွေကို လိုက်နာသင့်ပါတယ်။ – လက်ဖက်ရည်၊ ကော်ဖီ၊ ဆေးလိပ်စတာတွေကြောင့် နှုတ်ခမ်းသားမည်းတတ်တဲ့အတွက် လက်ဖက်ရည်၊ ကော်ဖီကို တတ်နိုင်သမျှလျှော့ပြီး ဆေးလိပ်ကိုရှောင်ပါ။ – ဗက်ဆလင်း (Vaseline) အလှဆီကို ပုံမှန်လိမ်းပေးပါ။ သံလွင်ဆီကိုလည်း လိမ်းနိုင်ပါတယ်။ –...